We Fight We Win. -- " More than Media ": သံဃာများ မြန်မာသံရုံးရှေ့ မှာ တခဲနက်ဆန္ဒပြကန့် ကွက်
သံဃာများ မြန်မာသံရုံးရှေ့ မှာ တခဲနက်ဆန္ဒပြကန့် ကွက်
ယနေ. နေ.လည်က ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို. မြန်မာသံရုံးရှေ.တွင်
စခန်းများအား အကြမ်းဖက် မီးလောင်ဗုံးများဖြင့် ဖြိုခွဲခဲ့ခြင်းအတွက်
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာသံဃာတော်များ ရှုံချကန်.ကွက် ဆန္ဒပြနေကြစဉ်။